ကိုဖြိုးဝေအောင်အမှုအကျဉ်းချုပ် — Asian Human Rights Commission
ကိုဖြိုးဝေအောင်အမှုအကျဉ်းချုပ် ကိုဖြိုးဝေအောင်သည် ဧပြီလ၂၂ရက်နေ့တွင် နေအိမ်မှလာရောက် ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး သင်္ကြန်ဗုံးဖောက်ခွဲမှု ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲချက်များဖြင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီး မတရားဖြောင့်ချက်ယူခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ဤကဲ့သို့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့သော ရဲအရာရှိများကို အရေးယူပေးပါရန် အင်းစိန်ထောင်တွင် အဖမ်းခံထားရသော ကိုဖြိုးဝေအောင်မှ စစ်အစိုးရထံတင်ပြ တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း တစုံတရာအကြောင်း ပြန်ကြားခြင်း မရှိခဲ့ခြေ။
ရန်ကုန်တိုင်း ရဲအဖွဲ့ရုံးမှ ရဲအရာရှိများမှ ကိုဖြိုးဝေအောင်ကို ၉ရက်တိတိညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ပြီး ဖြောင့်ချက်ပေးခံခိုင်းခြင်းကို အရေးယူပေးပါရန် သြဂုတ်လ ၄ရက်နေ့မှာ ဇနီးဖြစ်သူ မဌေးဌေးက တင်ပြခဲ့ပြီး သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်မာဆွေ ကအမှုကို ပြန်လည်စစ်ပေးပါရန် အသနားခံစာတင်သွင်းခဲ့သည်။
သူမဧ။်စစ်အစိုးရထံ တင်သွင်းသော အသနားခံစာထဲတွင်..ကိုဖြိုးဝေအောင်ကိုဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် နေအိမ်မှ လာရောက် ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီး အောင်သပြေစစ်ကြောရေး စခန်းတွင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီး၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ဝန်ခံခိုင်းခဲ့ကြောင်း၊ ကိုဖြိုးဝေအောင်ကို၂ရက်နဲ့၂ည မတ်တပ်ရပ်ခိုင်းထားခြင်း၊ ခေါင်းကိုရိုက်ခြင်း၊ ခြေထောက်ဖြင့်ကန်ခြင်း၊ ဒခေါက်ခွက်ကိုခြေဖြင့် တက်နင်းခြင်း ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ပြီး ကျောက်ခဲများပေါ်တွင် ဒူးထောက်ထိုင်ခိုင်းခြင်း၊ ယောကျာ်းအင်္ဂါကို မီးနဲ့တို့ခြင်း၊ ရိုက်နှက်ကန်ကျောက်ခြင်း စသည့်နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး ဖောက်ခွဲမှုကို ကျူးလွန်ပါသည်ဟု ထွက်ဆိုခိုင်းကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
တရားခံများပြည်ပကို ထွက်ပြေးပြီဖြစ်သည့် အတွက်ကိုဖြိုးဝေအောင်ကို ဝန်ခံသည်အထိ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ရဲမှုးတင်ကွန်းကပြောသည့်အပြင် အင်းစိန်ထောင် အတွင်းရှိရဲအုပ်ခင်မောင်ရီနှင့် ရဲအုပ်ကျော်စိန်ထွန်းတို့က ၆ရက်တိုင်တိုင် ထပ်မံညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ကြောင်း၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲမှုးတင်ကွန်း၊ ရဲအုပ်ခင်မောင်ရီနဲ့ ရဲအုပ်ဆွေလင်း၊ ရဲအုပ်ကျော်စိန်ထွန်း၊ ဒုရဲအုပ်အေးမင်းနိုင်၊ ဒုရဲအုပ်အေးကျော်၊ ဒုရဲအုပ်ဘိုဘို၊ ဒုရဲအုပ်စည်သူ(၈)ဦး အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ ရဲအရာရှိတွေကို အရေးယူပေးဖို့ ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့နောက် ဇနီးဖြစ်သူမှလည်း သြဂုတ်လ၁၆ရက်နေ့နေ့စွဲဖြင့် သူမဧ။်ယောကျာ်း အချုပ်သားတယောက်အနေဖြင့် ရသင့်သော အခွင့်အရေးများ မရရှိခြင်းနှင့် ရသင့်သော အခွင့်အရေးများရရှိစေရန် အင်းစိန် ထောင်တာဝန်ခံ အရာရှိထံသို့ ထပ်မံတင်ပြခဲ့သည်။ သူမဧ။်အစီရင်ခံစာထဲတွင် သူမဧ။်ယောကျာ်းဖြစ်သူမှာ ထောင်သို့ ရောက်သည်မှာ(၃)လကျော်ပြီဖြစ်ပြီးရုံးထုတ်တာ ၁လကျော်ပြီဖြစ်သော်လည်း အခြားအကျဉ်းသားများကဲ့သို့ မနက်ထောင်အဖွင့်တွင် အခြားအကျဉ်းသားများ ကဲ့သို့ အပြင်ထွက်ပြီး လမ်းလျှောက်ခွင့်မရကြောင်း၊ ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့သော မိသားစုဝင်များနှင့်လည်း ထောင်ဝန်ထမ်းများကပြောသမျှ လိုက်မှတ်နေသဖြင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောဆိုခွင့်မရကြောင်း၊ သူဧ။်ရှေ့နေနှင့်လည်းလွတ်လွတ် လပ်လပ်ပြောဆိုခွင့်မရကြောင်း၊ အမှုတွဲကိုလည်း ကိုဖြိုးဝေအောင်ကယူပြီး ဖတ်ခွင့်မရကြောင်း အမှုစစ်ဆေးသော တရားခွင်သို့ ဝင်ရောက်နားထောင်ခွင့် မရသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာထောင် အာဏာပိုင်အမှုစစ်တို့နှင့် ညှိနှိုင်းပေးရန် တရားသူကြီးထံ တင်ပြသော်လည်း ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသည်။ ပြီးနောက် တဦးတည်း နေရသည်မှာ ၃လကျော်ပြီဖြစ်သဖြင့် စိတ်ရောကိုယ်ပါ ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ရေးသားတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ကိုဖြိုးဝေအောင်မှ တရားသူကြီးဧ။် ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်များကို တရားမျှတမှု မရှိမည်ကိုစိုးရိမ်မိသောကြောင့် တရားသူကြီးပြုမူ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ကတိသစ္စာပြုလွှာ ပြုလုပ်ရန်နှင့် ၄င်းအမှုအား တခြားတရားသူကြီးမှ ကြားနားစစ်ဆေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကိုဖြိုးဝေအောင်ဧ။် အမျိုးသမီးမှ ကတိသစ္စာပြုလွှာ လျှောက်လွှာတွင်လည်း အထက်ပါ အချက်များကို ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါသော်လည်း ကတိသစ္စာပြုလွှာကိုငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသည်။အာရှလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှလည်း ကိုဖြိုးဝေအောင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကြေငြာချက်များ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ၊ အလျင်အမြန်လုပ်ဆောင်ရမည့် မေတ္တာရပ်ခံချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပြီးဖြစ်သော်လည်း တိုင်ကြားစာများကို လက်ခံရရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ယခုအခါဖြိုးဝေအောင်အား အခြား အကျဉ်းသားများ နှင့်အတူထားသည် အထိအကျဉ်းထောင် အာဏာပိုင်များက လိုက်လျောခဲ့သော်လည်း တရားခွင်တွင် အမှုစစ်ဆေးသည့်အခါ တရားသူကြီး၏ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုများကို တရားခံဖက်မှ ဆက်လက် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရဆဲဖြစ်ပြီး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် တရားစီရင်ရေး ဥပဒေပါ တရားခံ တဦး၏အခွင့်အရေးများ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရဆဲဖြစ်သည်။
Best viewed in Firefox/Safari browsers
with Burmese font Zawgyi-One installed.
ညှင်းပန်းခြင်း အမှုအသေးစိတ် တင်ပြရန်ရှိWednesday, August 25, 2010
တရားရုံးက အထက်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလုပ်Monday, September 13, 2010
အမှုသည်အခွင့်အရေးမရှိကြောင်း AHRC ကြေငြာချက်ထုတ်Monday, September 13, 2010
AHRCမှ ညှင်းပန်းမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကုလကိုပေးပို့Monday, August 30, 2010
ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံသူမှ စစ်အစိုးရကိုတိုင်တန်းWednesday, August 11, 2010
သင်္ကြန်အတက်နေ့ က X2O မဏ္ဍပ်ရှေ့တွင် ဗုံးဖောက်ခွဲမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခြင်းခံရသည့် ကိုဖြိုးဝေအောင် အားမတရား နှိပ်စက်ညှင်းပန်းပြီး ဖြောင့်ချက်ရယူကာရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးတွင် အမှုအား စစ်ဆေးလျက် ရှိပါသည်။
ကိုဖြိုးဝေအောင်သည် အကျဉ်းသားတယောက် ရရှိရမည့်အခွင့် အရေးများကို ချိုးဖောက်ခြင်း ခံရသည့်အတွက်အာဏာပိုင် များနှင့် တရားရုံး အဆင့်ဆင့်သို့ မိသားစုများမှတဆင့်တင်ပြတောင်းဆို ခဲ့သည်။ အာရှလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က၎င်းအမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်လျက်ရှိပါသည်။
အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကို နိုင်ငံတကာမှ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များ သိရှိစေရန် ကြေငြာချက်များ၊ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ အလျင်အမြန် လုပ်ဆောင်ရမည့်မေတ္တာ ရပ်ခံစာများ ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤအင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ထိုအမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများ အပြင်အမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများလည်းဖော်ပြ ထားသည်။
>> Full summary in Burmese.
Phyo Wai Aung was accused of taking part inabomb plot in the X2O Yangon Water Festival and was tortured to getaconfession. His trial process is still ongoing at Yangon northern district judge. Furthermore, he has been denied the facilities usually given to detainees and that is why he has madeacomplaint via his family members to the chief of the States to take action on the responsible officials who have done this. The Asian Human Rights Commission has released Urgent Appeals, Statements and press releases related to his case. Similarly you can see documents related to him in this page.
>> Full summary in English.
Torture, forced confession andadeath sentence in Myanmar: the case of Phyo Wai Aung
Open letter from Phyo Wai Aung's brother to plea for release
Complaint letter of Phyo Wai Aung's brother [PDF]
Judge case file [PDF]
Prison situation which was told by Pyoe Wai Aung [PDF]
BURMA: Interview with Phyo Wai Aung's brotherBURMA: 2nd Interview with Phyo Wai Aung's brotherBURMA: Interview with Phyo Wai Aung's wife
Supreme Court-transfer case [PDF]
Supreme Court-family to hear [PDF]
Supreme Court-case file [PDF]
Letter submitted about the Insein Prison [PDF]
Complaint Letter to Chief Justice and Attorney General [PDF in Burmese | DOC in English] January 13, 2011
Letter submitted to UN [PDF] January 1, 2011
Requesting letter on free and fair trial 3rd time [PDF in Burmese | DOC in English]
Letter to Chairman of SPDC for re-examining of the case [PDF in Burmese]
Letter to Chief of SPDC by his wife [PDF in Burmese]
Received voucher from Mr Ban Ki Moon, Secretary General of the UN [PDF]
Received voucher from Ms Pillay [PDF]
Letter to Chief of Justice regarding rejection of the rights [PDF in Burmese]December 29, 2010
Further submission 3rd time to Chairman of SPDC and Chief of Justice [DOC in English]December 29, 2010
Further submission 2nd time to Chairman of SPDC and Chief of Justice [PDF in Burmese] December 16, 2010
Complaint Letter to Myanmar authority [DOC in English]December 16, 2010
Letter to Chief of Justice regarding refusal to take an affidavit [PDF in Burmese]August 16, 2010 & November 4, 2010
Letter to Chief of Justice regarding refusal to take an affidavit [DOC] August 16, 2010
Complaint Letter to Chairman of SPDC by his mother [DOC in English]August 9, 2010
Complaint Letter to Chief of SPDC by his wife [DOC in English]August 4, 2010
Letter to Secretary of Myanmar Human Rights Group [PDF in Burmese | DOC in English]
Letter to Chief of SPDC regarding restriction to enter the court room [DOC in English | PDF in Burmese]
Letter to Chief of SPDC regarding rejection of the rights [DOC in English]
Human Rights Council - Working Group on the Universal Periodical Review [PDF]November 10, 2010
Report of SR Myanmar Quintana in General Assembly [PDF]September 15, 2010
BURMA/MYANMAR: Dossier of torture cases submitted to U.N. expertsAugust 27, 2010 [alrc.net]
X2O မဏ္ဍပ် ဗုံးဖောက်ခွဲမှုနှင့် ဖမ်းခံထားရသူအတွက် ရှေ့နေပါဝါ ထုတ်မပေးMay 16, 2010 [yoma3.org]
ရန်ကုန်ဗုံး စွမ်းအားမြှင့်ကို စွပ်စွဲ၊ တဦးဖမ်းမိ May 6, 2010 [mizzimaburmese.com]
ဗုံးလက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသူ ရှေု့နေငှားခွင့်မရ May 21, 2010 [mizzimaburmese.com]
သင်္ကြန်ဗုံးအမှု လူမှားဖမ်းဟု ဆို May 5, 10 [irrawaddy.org]